सत्ता समीकरणमा ‘रेशम फिरिरी’ « AayoMail
तिमी कहिलेकाहीँ आउँछौ
बाबा! घर जाउँ भन्छौ
म जेललाई होस्टेल भनेर ढाट्छु
पढाइ सिद्धियो भने आउँछु भन्छु
कहिलेकाहीँ त बाबासँगै सुत्छु भन्छौ
पठाएपछि तिम्रा ममत्वले कत्ति छाती चिरिन्छ, थाहा छ?
जेलको जीवन न हो
न डाँको छोडेर रुन सक्छु
न हात समाएर तिमीसँग हिँड्नसक्छु
आखिर एक बाउ न हुँ
सदरखोर डिल्लीबजारबाट २०७७ साल पुस १६ गते रेशम चौधरीले आफ्ना छोरालाई जन्मदिनको शुभकामनामा कोरेका शब्द हुन् यी।
२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको ‘थारु विद्रोह’मा एकजना दूधे बालकसहित ८ जनाको ज्यान मारेको आरोपमा रेशम अहिले ‘आजीवन काराबास’को सजाय काटिरहेका छन् सदरखोरमा।
र, आज फेरि एकपटक रेशम चौधरी राजनीतिको केन्द्रमा छन्।
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा बौरिरहने अधिकारका लडाइँले निम्त्याएको एउटा अत्यन्तै क्रुर दुर्घटना हो, ‘टीकापुर काण्ड।’
फेरि केन्द्रमा रेशम
२०७५ साल पुस १९ गते।
सदरखोरमा बसिरहेका रेशम चौधरीलाई एउटा गाडीमा राखेर प्रहरीले सिंहदरबार छिरायो। संसद सचिवालयको हलमा मधेसवादी दलका नेताहरू अनि सत्तारुढ(तत्कालीन नेकपा)का नेता तथा पत्रकारहरू खचाखच भइसकेका थिए।
हलमा पर्खिबसेका आफ्ना छोरालाई काखमा लिएर रेशमले केहीबेर कपाल सुमसुम्याइदिए। ढाका टोपी अनि ढाकाकै दौरा, सेता सुरुवाल लगाएका र कालो चस्मामा सजिएका रेशमलाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सपथ खुवाए।
चौधरीले थारु भाषामै सपथ पढे।
संसद सचिवालयका महासिचव मनोहरप्रसाद भट्टराईले चौधरीलाई सांसदको लागो छातीमा टाँसिदिए।
२०७२ सालको निर्वाचनमा कैलाली १ टीकापुर क्षेत्रका ३४ हजार ३ सय ४१ नागरिकको मत पाएका रेशम चौधरी जेलमा बस्दा बस्दै दुई वर्षपछि बल्ल सांसद भएको प्रमाण पाए।
त्यहाँ उनलाई मधेसवादी दल (तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी)का नेताहरूले उनलाई खादा लगाइदिए। अनि हात मिलाउँदै नेताहरूले बधाई दिए।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि सँगै थिए। रेशमले उनलाई भने – तपाईं हामी त आन्दोलनमा पनि सँगसँगै थियौं। कुनै बेला सँगसँगै पनि लड्यौं।’
देव गुरुङ मुसुमुसु हाँसिरहे।
त्यसपछि उनले पत्रकारहरूसँग करिब १० मिनेटजति कुरा गरे।
‘टीकापुरमा दुर्घटना भयो। राजनीतिक आन्दोलन भयो। सात सात जनाले सहादत प्राप्त गरे। टीकापुरलाई साँच्चिकै दुखेको छ। थारुहरूको घरबार जलाइयो। २५ वर्ष मिडियामा काम गरेँ। सायद नेपाली सांगितीक क्षेत्रमा राष्ट्रिय गीत लेखेको छु। म त्यस्तो मान्छे हुँ। ३४ हजार ३ सय ४१ जनतालाई लोकतन्त्रले न्याय दिनुपर्छ। त्यो घटनामा म पनि दु:खी छु। समवेदना छ। त्यही मतले प्रमाणित गरेको छ कि म दोषी छु कि छैन। न्यायालयले हामीलाई न्याय दिनुपर्छ। दोषीले कारबाहीको भागिदार हुनैपर्छ। दोषी उम्किनैहुँदैन। सानै उमेरमा गोरखा दक्षिणबाहु पाएको व्यक्त्ति हुँ। यो राजनीतिक दुर्घटना हो र निराकरण पनि राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ। घटना हुने बेलादेखि नै सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र भएको मैले कतिबेला षड्यन्त्र गरेँ अनि कसरी षड्यन्त्रकारी भएँ। हामीलाई हत्यारा अपराधि भनिरहँदा मान्छेलाई मजा त आउँछ होला तर हामी टीकपुर दुख्नेहरूलाई थाहा हुन्छ त्यसको पीडा।
अन्त्यमा उनले भने– हामी न्यायालयबाट न्याय चाहन्छौं। रेशम चौधरी भीख चाहन्न। हेर्नुस् त सांसदको लोगो लगाए, माला र खादा लगाएर म फेरि जेल जानुपर्ने?’
त्यसपछि उनलाई फेरि एउटा सेतो साइरनवाला गाढी चढाएर सदरखोरमै लगियो।
त्यसको करिब दुई महिनापछि अर्थात् फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई टीकापुर घटनामा दोषी देखाउँदै आजीवन कारावासको सजाय सुनाइदियो।
त्यो बेला छोडिएका लक्ष्मण थारुहरूलाई फेरि गत पुस २ गते उच्च अदालत दीपायलले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै जन्मकैदको सजाय सुनाइदियो।
२०७२ सालमा संविधान जारी हुने तरखर चल्दै थियो। संविधानका मस्यौदाहरूमा छलफल चलिरहेका थिए। पश्चिममा ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’को आन्दोलनको आगो बलिरहेको थियो।
त्यसअघि नै सल्किसकेको ‘थरुहट/थारुवान राज्य’ बनाउने आन्दोलनको आगो झन् दन्किसकेको थियो।
२०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा हजारौं थारु जम्मा भएर, सारा सरकारी कार्यालयमा ‘थरुहट स्वायत्त प्रदेश’ लेख्‍ने कार्यक्रम थियो।
एकातिर ‘अखण्ड सूदूर’ थियो। अर्कातिर ‘थरुहट’को आगो। टीकापुरमा त्यो आगोले धेरैको जीवन जलाइदियो। धेरैको जीवन उजाडिदियो। राजनीतिक संघर्षको इतिहासमा त्यो ‘कालो दिन’ बनेर बस्यो।
एकजना दूधे बालक र आठ जना प्रहरीको हत्या भयो। प्रहरीका एकजना एसएसपीसमेत मारिए। माओवादी जनयुद्धपछि भएका आन्दोलनका क्रममा मारिएका सम्भवत: उनी उच्च प्रहरी अधिकृत थिए।
त्यो काण्डमा मुछिए रेशम अनि लक्ष्मण थारूहरु।
त्यसपछि चौधरी भूमिगत नै थिए। २०७४ सालमा आम निर्वाचनको घोषणा भयो। रेशम चौधरीले राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवारी दिए। र, निर्वाचन जिते पनि।
कानुनको नजर फरार सुचीमा रहेका उनले २०७४ फागुन १४ गते अदालतलमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसपछि अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
सदरखोरबाट सिंहदरबार झिकाएर सपथ खुवाउनुअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले ओली सरकारलाई समर्थन दिएको थियो, चौधरीको रिहाइ। संविधान संशोधन र मुद्दा खारेजी गर्ने शर्तमा।
अदालतलले चौधरीलाई आजीवन काराबासको सजाय सुनाएपछि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने समाजवादी सरकारमै थियो। समर्थन दिएपनि राजपा भने सरकारमा थिएन।
२०७४ सालको चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासम्म पुगिसकेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच खास मेल हुन सकिरहेको थिएन। अनेक विवाद र तनावका बीच प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए र त्यसपछि ‘नेकपा’ले विभाजनको औपचारिक बाटो तय गर्‍यो।
सर्वोच्चले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय वदर गरेसँग अब नयाँ सरकार बनाउने तयारी थालेका प्रचण्डहरूलाई सर्वोच्चले अर्को झड्का दियो- ‘नेकपा’ को नाम ऋषि कट्टेललाई थमाइदियो। अनि एमाले र माओवादी केन्द्रको त्यो एकता बदर गरिदियो।
एकातिर ओली सत्ता जोगाउन अनेक कसरत गर्दैछन्। अर्कोतिर प्रचण्डहरूलाई यो निर्णयले झन् एक्ल्याइदियो। अब सत्ता समिकरणको साँचो घुमिरहेका बेला त्यसको केन्द्रमा पनि फेरि एकपटक जनता समाजवादी पार्टी छ। र, सत्तासाझेदारीमा उसको वार्गेनिङ प्वाइन्ट बनेका छन्– रेशम चौधरी।
सजिलो र अप्ठ्यारो पनि
‘नरसंहार’को आरोपमा अदालतले आजीवन काराबासको सजाय सुनाइसकेका एक कैदी भएका चौधरी।
जसपाले अहिले चौधरीको रिहाइलाई केन्द्रमा राखेको छ र सत्ता साझेदारीका लागि संविधान संशोधनलगायतका पुरानै मागहरू तेर्स्याएको छ।
‘टिकापुरको मुद्दा नयाँ होइन। यो पुरानै कुरा हो। फेरि फेरि दोहार्‍याइरहन नपर्ने कुरा हो’ ओली निकट एमाले नेता नारदमुनि राना थारु भन्छन् ‘यो सजिलो कुरा पनि हो र अप्ठ्यारो कुरा पनि।’
सजिलो यस मानेमा हो कि टिकापुर घटना एउटा राजनीतिक आन्दोलनमा भएको ‘दुर्घटना’ थियो। अर्को रुपमा अर्थ्याउने हो भने त्यो एक नरसंहार पनि थियो।
‘संसारमा ठूला-ठूला विद्रोहहरू भएका छन्। कैयौं मानिस मारिएका छन्। हामीले चाहे राजनीतिक हुने, हामीले नचाहे आपराधिक हुने भन्ने हुँदैन’ उनी भन्छन् ‘तर कानुनी जटिलताहरूले अप्ठ्यारो पारिदिएका छन्। तै पनि सरकारले यो मुद्दा मिलाउनुपर्छ।’
थारुले प्रधानमन्त्रीले चाहे यो कुरा सजिलैसँग टुङ्गिनसक्छ। थारु ढुक्क छन् कतिपय कानुनी प्रश्न र जटिलताहरूलाई पनि राजनीतिक निर्णयले नछेक्नसक्छ।
‘हामीले धेरैपटक यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेका छौं। हामीले सारा भूमिगत समूहलाई वार्तामा ल्याएका छौं। सबैको राजनीतिक अवतरण पनि गराएका छौ’ उनले भने ‘अनि थारुहरूलाई मात्रै जेलमा राख्ने त कुरा भएन। यो पनि एउटा राजनीतिक लडाइँ थियो। राजनीतिक कुरा थियो।’
सरकारले सिके राउतलाई राजनीतिक अवतरण गराएर थन्क्याइसकेको छ। अनि अहिले विप्लवहरूलाई पनि बोलाएर थान्को लगाइसकेको छ। उसका कार्यकर्तामाथि लागेका सबै आरोपहरू फिर्ता गरेर पक्राउ परेकाहरूलाई धमाधम छोडिरहेको छ।
थारुका अनुसार यसबारेमा प्रधानमन्त्री ओली पनि ‘सकारात्मक’ छन्।
र, त जसपाभित्रै पनि सरकारमा जाने रस्साकस्सी सुरु भइसकेको छ।
जसपा अहिले जसरी भए पनि सरकारमा जान चाहन्छ। विवाद यसमा मात्रै हो कि कोसँग मिलेर जाने? तीनधारमा देखिएको जसपा यतिबेला ओलीसँगै सरकार बनाउने वा प्रचण्डहरूसँग मिलेर सरकारमा जाने नभए कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पनि जाने निधोमा पुगेको छ।
‘हामी सरकारमा जाने हो। त्यहीँ गएर आफ्ना अधिकार र मागका लागि संघर्ष गर्ने हो’ जसपाका नेता मोहम्मद इश्तियाक राई भन्छन् ‘हामीले हेर्न त सबैलाई हेरिसक्यौं नि। माओवादीलाई पनि समर्थन गरेकै हो। कांग्रेसलाई पनि हेरेकै हो। र ओलीसँग पनि बसेकै हो। अब फेरि त्यही मुद्दाको कुरा हो।’
रेशम चौधरी को हुन्?
रेशम चौधरी कुनै बेलाका ‘भेट्रान’ कलाकार हुन्। उनले दर्जनौं गीतमा संगीत भरेका छन्। दर्जनौं गीत लेखेका छन्। तीमध्ये धेरै राष्ट्रिय भावले भरिएका गीतहरू पनि छन्।
उनले टीकापुरमा रेडियो पनि चलाउँदै आएका थिए। उनले बनाएको एउटा ‘कमैया’ को जीवन समेटेको फिल्म थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रदर्शन भइसकेको छ। उनी करातेका प्रशिक्षक पनि हुन्।
काठमाडौंको आरआर क्याम्पसमा एमाले निकट अनेरास्विवयुबाट स्ववियु सदस्य निर्वाचित भएपछि उनको औपचारिक राजनीतिक जीवन सुरु भएको थियो।
२०५४ सालमा एमालेको विभाजनपछि मालेतिर सोझिएका उनले थुप्रै दलहरू बदले।
उनी २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्चानमा कैलाली क्षेत्र नं १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। तर उनी पराजित भए। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि उनी क्षेत्र नं १ र ३ बाट उम्मेदवारी दिए। यसपटक रेशमलाई राजेन्द्र महतोको तत्कालीन नेपाल सदभावना पार्टीले टिकट दिएको थियो। तर त्यहाँ पनि उनी पराजित भए। पछि उनी सदभावनाकै केन्द्रीय सदस्य भएका थिए।
चौधरीले चलाएको थारु उत्थान मञ्च भन्ने गैरसरकारी संस्थालाई भारतीय दूतावासले पनि थुप्रै सहयोग गरेको थियो।
मिडिया सञ्चालक, कलाकार अनि समाजिक काम। टीकापुरमात्रै होइन रेशम चौधरी देशभरि चिनिइसकेका थिए।
संघियताको बहससँगै चर्किएको ‘थरुहट’ आन्दोलनमा उनी विस्तारै जोडिँदै थिए। कुनै बेला माओवादीका ‘लडाकु’ रहेका लक्ष्मण थारुले पछि थरुहट सेना पनि बनाएका थिए।
‘थरुहट/थारुवान’ आन्दोलन चर्किँदै जाँदा लक्ष्मण थारु र रेशम चौधरीहरू निकै चर्चामा आइसकेका थिए। त्यही आन्दोलन भदौ ७ गते टिकापुरमा दुर्घटनग्रस्त भयो।
र, रेशमहरू अहिले जेलमा छन्। लक्ष्मण चौधरीहरू फरार भूमिगत।
टीकापुर घटनाकाे फैसला उल्टियाे, लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैद (फैसलाकाे विवरणसहित)
जन्मकैदको फैसलापछि लक्ष्मण चौधरी : न्यायका लागि जीवनको अन्तिम विद्रोह गर्छु